musha Africa Kofi Kingston Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeAmerican-Ghanaian wrestler ine zita remadunhurirwa “Iyo Dynamo Yakakomberedzwa”.
Yedu Kofi Kingston Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ongororo yeWWE Nyeredzi yeGhanian mabviro inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwemunhu.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yemapurisa akakwirira mu World Wrestling Entertainment. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveKofi Kingston's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kofi Kingston Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga:
Kutanga kubva, Kofi Sarkodie-Mensah akazvarwa musi we 14th weAugust 1981 kuKumasi muAshanti, Ghana. Ndiye aiva mukuru wevana vatatu vakazvarwa naamai vake, Elizabeth uye nababa vake Kwasi Sarkodie-Mensah.
Kofi Kingston vabereki Kwasi naElizabeth. Credits: RG uye LibGuides.
Wechidiki Kingston aingova namakore matatu chete apo mhuri yake yakatama kubva kwaakaberekerwa kuenda kuUS muna 1982.
Mhuri yakagadzira imba yavo nyowani kuWinchester muMassachusetts uko Kingston akarererwa pamwe chete nemunin'ina wake, Kwame uye hanzvadzi yekupedzisira Nana.
Wechidiki Kingston aingova namakore matatu chete apo mhuri yake yakatamira kuUS.
Kukura muMassachusetts, nyika yeAmerican neyeGhanian yerudzi rwevatema nemidzi yeGhanian yaive fan yekushinga yekurwa iyo yaiwanzomuka mangwanani ega ega Mugovera kuti vatarise zvechitendero "Superstar Mugovera".
Hwehudiki hwake hwaionekwawo nezviitiko zvemuviri sekutamba musango nevezera rake, kusvetuka fenzi, uye kuchovha mabhasikoro.
Kofi Kingston Dzidzo:
Mbiri yekuchikoro kwaKingston inosanganisira zvidzidzo zvake paWinchester High School muMassachusetts.
Ndichiri pachikoro Kingston akabatanidza vadzidzi nekutamba baseball uye kushingairira kuita gymnastics.
Kofi Kingston aishingairira mumitambo uye jimunasitikisi mukati memazuva ake echikoro.
Panguva imwecheteyo, akatsigira kuda kwake kwekurwa kunyange mushure mekufambira mberi kuenda kuBoston College kwaakawana degree rekutaurirana.
Paakapedza kudzidza kukoreji, Kingston akapfupikisa akashanda basa rekambani iro raakakurumidza kudzidzira kuti adzidziswe pachikoro chekurwa mukupera kwa2005.
"Zuva rangu rekutanga kubasa ndakagara mubeche rangu ndokutarisa madziro asina chinhu uye zvaishungurudza zvikuru ... zvisinei, musi wekutanga chaiwo wandakapinda muchikoro chemutsimba, ndaiziva kuti ndaive munzvimbo chaiyo". Anoyeuka.
Kofi Kingston akapfupisa akashanda basa rekambani raanovenga.
Kofi Kingston Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Kingston akaita mutsimba wake wekutanga kurwira musi wa 24 Kukadzi 2006 panguva yemutambo naTony Omega kuChaotic Wrestling (CW).
Mwedzi yakati gare gare, akapinda mumakwikwi ePWF Mayhem Heavyweight Championship nekurwa Evan Siks musi wa4 Chikumi.
Kofi Kingston akaita mutsimba wake mu2006.
Vachitora basa rekutanga remabasa vakaona Kingston aisava nekutengeswa kwakafanana neNational Wrestling Alliance (NWA), Millennium Wrestling Federation (MWF), New England Championship Wrestling (NECW) uye Eastern Wrestling Alliance (EWA) yose pakati pekupedzisira kwe2005 nekupedzisira kwe2006.
Kofi Kingston Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Kingston akatora nhanho huru padhuze nemukurumbira nekusaina chibvumirano chebudiriro neWWE munaGunyana 2006. Akabva atamisirwa kunzvimbo yekuvandudza yeWWE, Deep South Wrestling (DSW).
Kofi Kingston Wrestling kunharaunda yeWWE yekuvandudza DSW.
Ndichiri mundima iyi, Kingston akagamuchira zita rechitambo "Kofi Nahaje Kingston" uye akaita kuoneka kweese DSW pamwe neayo yeKentucky-based hanzvadzi kusimudzira, Ohio Valley Wrestling (OVW).
Pasina nguva refu, akaendeswa kuFlorida Championship Wrestling (FCW) kwaakashandira chikamu chikuru chekupera kwa2007 pasi pezita rakapfupiswa reringi - "Kofi Kingston".
Kofi Kingston Bio - Kubudirira Nyaya:
Kingston akaramba asingazivikanwi kusvikira apinda muhondo ye24-murume panguva yeWrestleMania XXIV inotaridzwa muna 2008. Akave asi akadzingwa kubva kumakwikwi ayo ainzi ECW Championship Title.
Zvakangodaro, Kingston akanyatsoita mushe musarudzo dzeECW nekubvisa mitsara yakagara kwemwedzi.
Pasina nguva refu, Kingston akanyoreswa kuRaw brand uko kwaakakunda Chris Jericho kuti atore rake rekutanga Intercontinental Championship Title.
Kofi Kingston akakunda yake yekutanga Intercontinental Championship Chinyorwa muna 2008.
Nezve Kori Campfield - Mukadzi waKofi Kingston:
Kofi Kingston murume akaroora. Tinokuunzira ruzivo nezve hupenyu hwake hwewanano kusanganisira masanganiro aakaita nekusaroora mukadzi wake Kori Campfield.
Kutanga, vaviri vacho vaive vadikani kwenguva yakareba vakasangana ndokutanga kufambidzana pamberi pokumuka kwaKingston mukurumbira. Kusiyana naKingston, Kori akaberekerwa muIthaca muNew York, USA.
Kofi Kingston nemukadzi wake Kori.
Vakatora hukama hwavo kuenda padanho rinotevera nekuroora mu2010.
Muchato wavo waive mutambo wepachivande uyo waingopindwa nevanhu vashoma vakakosha muhupenyu hwevakaroora. Kubatana kwaKofi naKori panguva ino kwakakomborerwa nevanakomana vaviri.
Wokutanga akaberekwa imwe nguva mu2013 apo mwanakomana wavo wechipiri, Orion Kingsley Sarkodie-Mensah akazvarwa muna Kubvumbi 2016.
Kofi Kingston nemukadzi wake nevana mu2017.
Kofi Kingston Mhuri Chokwadi:
Kingston akaberekerwa mumhuri yakangwara ye5. tinokuunzira ruzivo rwechokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yake.
Nezve Baba vaKofi Kingston:
Kwasi Sarkodie-Mensah ndibaba vaKingston. baba vevana vatatu mudzidzi anoshanda paBoston College muU.S.
Kwasi neshamwari dzake dzakangwara pakutanga vakaodzwa mwoyo nechisarudzo chaKingston chokuva mutambi wemutsimba.
Ichokwadi, imwe yeshamwari dzaKwasi aishanda kuGhanaian academia, Raymond Osei-Boadu akataura kuti:
“Sei munhu anokwanisa kuenda kunopedza chikoro achifunga kuisa zvese izvi kumeso kumeso? Handikwanise kuzviunza kuti ndinzwisise. ”
Baba vaKofi Kingston About Kwasi inyanzvi.
Zvisinei, baba vaMamboston zvino vanofara nekugadzikana kwezviitiko zvichiziva zvakajeka kuti Kingston anoda uye anofambira mberi nekutwisana.
"Ndinoziva chinhu chakanyanya kupokana nehungwaru, asi ndinofunga munhu wese anofanirwa kumuka mangwanani uye kufarira zvavanoita," anoti.
Nezve Amai vaKofi Kingston:
Dr Elizabeth ndiamai vaKingston uye vanosimbisa zvakanyanya tsika dzemhuri uye mudziviriri wenhaka yavo. NdiErizabheti uyo akazivisa kumapepanhau kuti Kingston aive Ghanian akazvarwa wrestler.
Kuburitswa kwakaunza kupera kwekuzviratidza kwake seJamaican mumazuva ekutanga ebasa rake nekuti aifunga kuti vateveri vangangodaro vanombundira mutsimba kubva kunyika yaBob Marley nemumhanzi weReggae.
Amai vaKofi Kingston vakazvigadzirira kuva Ghanian.
Dr Elizabeth vakashanda semusoro wesangano reGhanaian-America kuUS inonzi Ghanaian Association yeGreater Boston.
Iye zvakare ndiye Instructional Liaison Librarian paMerrimack College, North Andover, Massachusetts.
Elizabeth ane hukama hwakanaka naKingston uye anofara kuti akazvisimbisa semumwe wepamusoro-soro muWorld Wrestling Entertainment.
Nezve Kofi Kingston's Siblings:
Kingston ane vanin'ina vaviri chete. Ivo vanosanganisira mukoma wake VaKwame Sarkodie-Mensah uyo anoshanda semunyori uye nyanzvi yecyber. Kune rimwe divi, ihanzvadzi yake mushakabvu Nana Akua.
Kusvika parufu rwake muna 2015 Nana aive akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeMassachusetts (UMASS), Boston Campus.
Aive zvakare akagadzirirwa kutanga chirongwa cheMBA muHospitality Management paJohnson & Wales University muProvidence, Rhode Island.
Kofi Kingston anonoka Sista Nana.
Hupenyu hweMunhu kure neWrestling
Chii chaunoziva nezvaMamboston kunze kwekuita kwake mu-ring? gara shure apo isu tichikuunzira maitiro eunhu hwemunhu kuitira kuti akubatsire kuva nemufananidzo wakazara wake.
Kutanga, Kofi ane nyore-kuenda uye anozvininipisa anozvininipisa munhu. Ivo baba vevaviri vaimbova nenyaya dzekuzvitarisira pasi kusanganisira kupengera vabereki vake nekumutumidza zita rekuti Kofi pachinzvimbo chaJoey.
Nekudaro, iye zvino anozvikoshesa nekuda kwekusiyana kwake uye nekuraira vamwe kuti varambe vakavimbika kwavari.
Muchiedza chimwe chete, Kingston's ane tattoos ane kukosha kwetsika uye akadzika midzi muWest Africa nhaka yake.
Kofi Kingston Tattoos ane kukosha kwetsika uye anoratidza yake West Africa nhaka.
Zvaanofarira zvinosanganisira kurova magym uye kutamba mitambo yemavhidhiyo nevanakomana vake. Kure nekurwa, Kingston ane zvaanofarira mu baseball, nhabvu uye basketball.
Saizvozvo, iye mutsigiri mukuru weBoston Red Sox, New England Patriots uye Boston Celtics.
Kofi Kingston Chokwadi:
Kingston ndiye murwi wekutanga weGhana kuhwina mukombe muWorld Wrestling Entertainment.
Iye zvakare ari mana-nguva Intercontinental Champion, katatu-nguva US Champion, uye mashanu-nguva Tag Team Champion muWWE. zvisinei, iye achiri kuwana World Championship kana Universal Championship.
Iye anozivikanwa nokuda kwekunakidza kwake nzira yekumisa kubviswa kwake kubva muhondo yemadzimambo uye Royal Rumble mamiriro ezvinhu sezvinoonekwa muvhidhiyo iri pasi apa.
Kingston inyanzvi muBrazillian martial art ye "Capoeira". Kurwira kunoenderana nekukwanisa kwake kuhwina mitambo yewrestling nekutora vadzivisi vake nekupika kwekurova achivatsausa nemaflips.
Akagadzira uye akarairidza timu yeteki inonzi "Zuva Nyowani". Chikwata chine nhengo dzacho chinosanganisira Kingston, Xavier naBig E vanobata rekodhi yekuve anotonga kwenguva refu WWE Tag Team Champions munhoroondo.
Iyo New Day Tag Chikwata inobata rekodhi yekuve akarebesa-kutonga WWE Tag Team Makwikwi munhoroondo.
Kofi Kingston Mararamiro:
Nekufungidzirwa kwemari inokwana $ 3 mamiriyoni, Kingston anogara hupenyu hwepachivande nemudzimai wake nevana pane nzvimbo yavo duku yavanozivikanwa muAustin, Texas, United States.
Wrestler anoedza zvakanakisisa zvaanogona kuchengetedza chero chinhu kunze kwebasa rake kubva kuvanhu uye zvishoma zvishoma zvinozivikanwa pamusoro pemhando yemotokari yaanoshandisa kuuraya mugwagwa.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kofi Kingston Childhood Nhau uye Untold biography chokwadi.
At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kururamisira tichikupa nyaya dze WWE Superstars. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!